ထူးဆန်းထွေလာ ဤကမ္ဘာ (ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သင်မသိသေးတဲ့ အချက်တွေ) | Buzzy
ကမ္ဘာမြေဟာ ဒီနေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ သက်ရှိတွေနေထိုင်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောဂြိုလ်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်မှာကျောက်သားတွေနဲ့မာကျောတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတဲ့ ဂြိုလ်လေးလုံးထဲက တစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။(ကျန်တဲ့သုံးခုကတော့ဗီးနပ်စ်၊မားစ်နဲ့ မာကျူရီဂြိုလ်တွေပါ)ကမ္ဘာကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကတောင်တန်းတွေ ချိုင့်ဝှမ်းတွေဘယ်လောက်ပဲများများကမ္ဘာကြီးကိုလက်ထဲမှာကိုင်လို့ရတဲ့အရွယ်အထိချုံ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘိုးလင်းပစ်တဲ့ဘောလုံးလေးလိုချောမွတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့နေပတ်လမ်းထဲမှာလည်ပတ်မှုနှုန်းဟာနှစ်တစ်ရာပြည့်တိုင်း 2စက္ကန့်လောက်နှေးကွေးသွားပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကိုယ်တို့တွေတွေးထင်ထားကြသလိုမျိုးဝိုင်းစက်နေတဲ့စက်လုံးကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဘဲဥပုံခပ်စောင်းစောင်းလုံးလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တို့ဟာခပ်စောင်းစောင်းလေးပဲရှင်သန်နေကြတာပေါ့။ လုပ်သမျှတွေတလွဲဖြစ်ရင်စိတ်မပျက်နဲ့တော့နော်၊ကမ္ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကစောင်းရွဲ့နေသေးတာပဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်က ပမွှားလေးဖြစ်တဲ့ကိုယ်က ဘာများမျှော်လင့်လို့ရမှာလဲပေါ့။
နှင်းဆီနက်တို့ သစ်ခွနက်တို့ ဆိုတာတွေဟာ တကယ်တော့အနက်ရောင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အလွန်အရောင်ရင့်တဲ့အပြာ ဒါမှမဟုတ် ခရမ်းလိုအရောင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်ကရင့်လွန်းတော့လူ့မျက်စိထဲမှာအနက်လို့ယူဆလိုက်တာပါတဲ့။ကမ္ဘာမြေကိုက အနက်ရောင်ပန်းတွေပွင့်နိုင်စွမ်းမရှိတာပါ။ အရောင်လွင်တဲ့ကိုယ်တို့ကမ္ဘာမြေဟာချစ်စရာ။
ကမ္ဘာပေါ်က အချို့သော သဲကန္တာရတွေဟာ သီချင်းဆိုကြပါတယ်
သီချင်းဆိုတယ်ဆိုတာက စကားလှအောင်ပြောတာပါ။တကယ်တမ်းက အသံပြုတာပါ။အချို့ကလည်း ညည်းသံလိုလိုကြားပြီးအချို့ကတော့ ကျမ်းစာရွတ်သံ၊ပျားတွေအုံလိုက်ကျင်းလိုက်အော်မြည်သံတွေကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲတည်ရှိနေဆဲပါ။ညကြီးမင်းကြီးသဲကန္တာရထဲမှာတစ်ယောက်တည်းနေတုန်း ညည်းသံလိုလိုကြီးသာကြားလိုက်ရရင်ဖြင့်….(အမယ်လေး…ရေးရင်းနဲ့တောင် ခေါင်းနဘမ်းတွေကြီးလာပြီ :3)
မြေကမ္ဘာရဲ့လနတ်သမီး (အံမယ် သိုင်းဝတ္ထုနာမည်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့)
ကမ္ဘာကြီးရဲ့လဟာ အခြားဂြိုလ်တွေရဲ့လလိုမျိုး နာမည်မရှိပေမယ့်အခြားဂြိုလ်တွေရဲ့လတွေထက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ များစွာသော သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်အရလဟာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုကြီး (ပေါက်ကွဲမှုတွေအများကြီးလည်းဖြစ်နိုင်) ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာ လကမ္ဘာဟာ ကမ္ဘာဂြိုလ်ကနေပဲ့ထွက်သွားပြီး သီးခြားရပ်တည်ရတဲ့ဂြိုလ်တစ်လုံးဖြစ်သွားရတော့တာပါပဲ။(ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တုန်းချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာတစ်ယောက်က ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်ခဲ့ တစ်ယောက်က လဖြစ်လာမယ့် အပိုင်းအစကြီးထဲပါသွား၊Jack…Rose…. Jack…. Rose ဆိုပြီးအော်ကြပေါ့လေ၊အဲ့ဒီ့လို Sci-fi movie ရိုက်ရင်အတော်ကြည့်ကောင်းမယ့်သဘောမှာရှိတယ်နော်၊ဇာတ်ပေါင်းပေးလို့တော့ရမယ်မဟုတ်ဘူး၊လက ကမ္ဘာဂြိုလ်နဲ့မှပြန်မဆက်လာပဲကိုး၊အဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်တစ်ကွဲစီနဲ့သေသွားကြပေါ့၊အဲ့မှာ ဟိုသီချင်းလေးနောက်ခံဖွင့်ပေး…မပေါင်းတဲ့ဇာတ်သိမ်းခန်းတွေအမြဲမုန်းတဲ့သူဘာညာဘလာဘလာပေါ့)Supermoon တွေဘာတွေဖြစ်နေရတာကလည်း လကမ္ဘာက ကမ္ဘာဂြိုလ်နဲ့နီးနီးနားနားမှာနေချင်တဲ့သဘောရှိလို့နဲ့တူပါတယ်။
4000tons (တန် လေးသောင်း)အလေးချိန်ရှိတဲ့ အာကာသထဲကအမှုန်တွေဟာကမ္ဘာကြီိးပေါ်ကို နှစ်စဉ်ကျရောက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီအမှုန်တွေထဲမှာ အောက်စီဂျင်၊အိုင်းယွန်း၊ကာဗွန်နဲ့ အခြားဒြပ်စင်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ဒါတွေဟာ တကယ့် ရေမရောတဲ့ကြယ်မှုန်တွေပါပဲ။ ကိုယ်တို့က အဲဒါတွေကိုရှိုက်သွင်းနေကြတယ်..ကြယ်မှုန်တွေကြားမှာနေထိုင်ကြတယ်။ကြယ်မှုန်တွေကို ထိတွေ့နေကြတယ်..။ ကမ္ဘာကြီးကို ကြယ်မှုန်တွေနဲ့ ခြုံလွှမ်းထားတယ်…။ဘယ်လောက်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလိုက်သလဲ…။